ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပရေးရာ Archives - Page9of 10 - Pissaya News
မလိုအပ်ဘဲအပြင်မထွက်ပါနဲ့။ Outdoor Air Pollution အိမ်ပြင်ပလေထုညစ်ညမ်းမှုဟာ အိမ်တွင်းထက်အများကြီးများတာမို့အိမ်ထဲမှာ တံခါးအနည်းငယ်သာဖွင့် သို့ Air Purifier တပ်ပြီး တံခါးပိတ်နေတာက လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ထိတွေ့စေဖို့ အများကြီးလျှော့ချပေးပါလိမ့်မယ်။ မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းစည်း( Mask) တပ်ဖို့ သတိပြုပါ။ မိမိသွားမယ့်နေရာဟာ မြို့လယ်ခေါင်လို ( ကားကျပ်၊ ကားမီးခိုးအထွက်များ) တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါက Mask တပ်ထားမှသာသင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ Mask ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ ရိုးရိုးသာမန် Mask ( Surgical Mask) လေးတွေကတော့ မြင်နိုင်တဲ့ ဖုန်၊ အမှုန်လောက်ကိုသာ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လေထဲပါလာတဲ့ Chemical ( ဓာတုပစ္စည်း) တွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ Respirator ပါတဲ့ Mask တွေက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ Respirator ပါတိုင်းလည်း Chemical အကုန်လုံးကိုမကာကွယ်နိုင်လို့ Mask ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆို တာ သေချာရွေးချယ်ဝယ် ယူဖို့အကြံပေးပါရစေ။ သွားမယ်ဆိုရင် အချိန်ရွေးသွားပါ။ Mask လည်း ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ သွားမယ့်အချိန်ကို ရွေးလိုက်ပါ။ လေထုညစ်ညမ်းမှုတွေအဆိုးဆုံးအချိန်ဟာ နေ့လည် ၁၂နောက်ပိုင်းမှ ၃နာရီလောက်ထိ အပူချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်လို့ အဲ့ဒီအချိန်တွေကို ရှောင်သွားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းလေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချပါ။ အပြင်မသွားပေမယ့် အိမ်တွင်းမှာလေထုညစ်ညမ်းနေမယ်ဆိုလည်း မထူးခြားနား ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ထဲမှာဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ခြင်ဆေး၊ အမွှေးတိုင်ထွန်းတာတွေလျှော့ချမယ်ဆိုရင် အိမ်ထဲမှာလေကောင်းလေသန့် လေးရနေစေမှာပါ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ အိမ်မှာဖုန်သုတ်ရင် လည်း ရေစိုဝတ်လေးနဲ့ သုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်…
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတာတွေက ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းရင်း ရှာမရတဲ့ ရောဂါတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဆိုတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေ ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ 1. ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ကိုယ်တွင်းစနစ်တွေအပေါ်မှာ အမြဲဖိအားသက်ရောက်နေတဲ့အခါမှာ အချိန်တိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုက ဒီပြဿနာကိုပဲ အချိန်တိုင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ခေါင်းထဲရောက်နေတဲ့အတွက် အိပ်မပျော်လည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ဦးနှောက်က အဖြေကို ရဖို့အတွက် အချိန် ပိုပြီး အလုပ်လုပ်နေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ 2. သွားကြိတ်ခြင်း သွားကြိတ်တာကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အိပ်ရေးပျက်တာနဲ့ ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ အာရုံကြောတွေက အနားမရဘဲ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာ ပါးစပ်မှာ လာပြီး အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ သွားကြိတ်ခြင်းကြောင့် သွားပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်သလို မေးရိုးတွေကိုလည်း နာကျင်စေပါတယ်။ 3. ခေါင်းကိုက်ခြင်း တင်းအားကြောင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းစီမှာ ဖိထားသလိုမျိုး ကိုက်နေပြီး ခေါင်းတစ်ခါ ကိုက်ရင် နာရီဝက်ကနေပြီး နာရီအနည်းငယ်အထိ ကြာတတ်ကာ လည်ပင်းနဲ့ ပခုံးများ တောင့်တင်းခြင်းနဲ့ တွဲပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုခေါင်းကိုက်တာမျိုးကို ပုံမှန်ခံစားရနေပြီ ဆိုရင်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ 4. မူးဝေခြင်း မူးဝေခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အရမ်းပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းတွေကို…
Altermative Medicine ဟုခေါ်သော ပေါင်းကူး ဆေးပညာ ပါရဂူ ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်၏ ဟောပြောချက်တွင် တညင်းသီးကို ဓာတ်ခွဲ သုတေ သန ပြုကြည့်သောအခါ လူကို အကျိုးပြုသည့် မည်သည့် အဟာရ မျှမပါဝင်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော ဖန်ချောင်း ကဲ့သို့သော ကလာပ်စည်းများသည် ကျောက်ကပ်တွင် သွားပိတ်နိုင်သဖြင့် အန္တရာယ် ရှိသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီး စေနိုင်သည် စားသင့်သည့် အသီး မဟုတ်။ အတိုင်း အတာမရှိ။ လုံးဝမစားသင့်သော အသီးမျိုး ဖြစ်သည်ဟု တင်ပြထားသည်။ သို့သော် တညင်းသီးကို မြန်မာတို့ စားသုံးခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ ကျော်ခဲ့ ပြီဟု သိရှိရသည်။ တညင်းသီးကို ကြိုက်သူများ အတွက် တင်ပြလိုသည်မှာ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဆေးပညာ ရှု့ထောင့် များအရ စေးထန်ပျစ်ချွဲသော အာပေါအာဗန္ဓရ အစာဖြစ်သည်။ တညင်းသီးပြုတ်ကို တို့စရာများ အဖြစ် စားလျှင်အဖြေဓာတ် အဖြစ်ရှောက် ရွက် အနည်းငယ်ကို တို့စားပေးပါ။ တညင်းသီး ပြုတ်လျှင် သကြား အနည်းငယ်နှင့် ရှောက်ရွက်ထည့်ပြီး ပြုတ်ပါ။ နူးလွယ်ပြီး အဖန်ဓာတ်၊ အစေးဓာတ်လျော့နည်း စေသည်။ တညင်းသီးကို ရင့်သည့် အသီးရှောင် ပြီးနုသော အသီးများကို ထက်ခြမ်း ခွဲပြီး ဖန်ပုလင်းတွင် ထည့်ပြီးဆားရည် စိမ်ထားပါ။ ကျောက်ကပ်တွင် အစေးဓာတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်…
အရွယ်မတိုင်မီသွေးဆုံးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သော သဘာဝနည်းလမ်းများ
အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် 40 နှောင်းပိုင်းနှင့် အသက် 50 ကျော် စတွင်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော်လည်း ယနေ့ခေတ် တွင် အသက် 30 ကျော်စနှင့် သွေးဆုံးစပြုလာသူ အမျိုးသမီး များစွာရှိလာပြီး သွေးဆုံးခြင်းလက္ခဏာများအနေဖြင့် အိပ် မပျော်ခြင်း၊ ပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဝလာခြင်း၊ လိင်စိတ်လျော့နည်းလာခြင်း၊ ကလေးမရနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း စသည်တို့အပြင် ကျန်း မာရေးပြဿနာများစွာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ သွေးဆုံးခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍မရသော်လည်း အသက် 30 ကျော်စ အမျိုးသမီးများအဖို့ အရွယ်မတိုင်မီသွေးမဆုံးစေရန်အတွက် မှားယွင်းသောနေထိုင်မှုပုံစံများကို ရှောင်ကြဉ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရွယ်မတိုင်မီသွေးဆုံးခြင်းကို အောက်ပါသဘာဝနည်းလမ်းများဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ 1. ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင်ဓာတ် (Phytoestrogen) ကြွယ်ဝသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း သွေးဆုံးကာနီးအမျိုးသမီးများတွင် မဟော်မုန်းဓာတ်ဖြစ်သော အီစထရိုဂျင် (Estrogen) ဟော်မုန်း လျော့နည်းလာတတ်သည့်အတွက် အီစထရိုဂျင်နှင့်ဆင်တူပြီး အပင်များမှရရှိတတ်သည့် ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင်ဓာတ်များများပါဝင်သည့် အစားအစာများကို အထူးစားသုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖိုင်တိုအီစထရိုဂျင် ပြည့်ဝသောအစားအစာများစားသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ခံစားရသည့် သွေးဆုံးကိုင်သောလက္ခဏာများကို လျော့ပါးသက်သာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ မုယောစပါးကဲ့သို့သော အစေ့အဆန်များ၊ ပဲ၊ သစ်ကြားသီးကဲ့သို့သော အခွံမျာသီများနှင့် ဆေးဘက်ဝင် အပင်အများစုတွင် ဖိုင်ထိုအီစထရိုဂျင်ဓာတ် ပေါများစွာပါဝင်သည်။ 2. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း အသက် 20 ကျော်အရွယ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်မလုပ်လျှင်ရသေးသော်လည်း 30 ကျော်အရွယ်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ မနေသင့်ပေ။ သွေးဆုံးခြင်းသည် ပုံမှန်သားဥမကြွေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဝလွန်ခြင်းသည် သားဥကြွေခြင်းကို ပုံမမှန်ဖြစ်စေတတ်သည်။ အသက်အရွယ်မရွေး ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ကျန်းမာရေး၏သော့ချက်ဖြစ်ပြီး…
အာဟာရ ပညာရှင်များကတော့ ငုံးဥဟာ အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝပြီး နေ့စဉ်စားသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ငုံးဥဟာ ကြက်ဥနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လျင် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်ပိုမို များပြားပါတယ်။ အခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ၁။ ငုံးဥဟာ အာရုံကြော စနစ်ကို ထိန်းပေးပြီး မှတ်ဥာဏ် ကောင်းမွန်စေပါတယ် ၂။ ငုံးဥဟာ ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ၃။ အရေပြားနဲ့ ဆံပင် အလှကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အလှကုန် ပစ္ဏည်းတွေမှာတောင် အသုံးပြုကြပါတယ် ၄။ အစာအိမ် အနာကိုလဲ သက်သာစေပါတယ် ၅။ သွေးအားနည်းရောဂါကို သက်သာစေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ၆။ တီဘီရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကျပ် နှင့် ဆီးချိုသမားတွေလဲ ငုံးဥကို ပုံမှန် စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ငုံးဥ တစ်လုံးမှာ အဆီ 1g , အသားဓာတ် 1g ၊ ဗိုက်တာမင် A ၊ C ၊ ကယ်လ်စီယမ် နှင့် သံဓာတ် တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ကြက်ဥ တစ်လုံးမှာတော့ ကစီဓာတ် 1g , အဆီ 5g , အသားဓာတ်6g သကြားဓာတ် 1g ဗီတာမင် A ၊ C ၊ ကယ်လ်စီယမ် နှင့်…
အသက်ကြီးသူတွေဟာ အပူဓာတ်နဲ့ စိုစွတ်မှုတွေကို မခံစားနိုင်တတ်ကြပါဘူး။ အပူချိန် 100°F (38°C) လောက်နဲ့တင် အပူဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတာ၊ အရေးပေါ်ကို ပြသတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အပူဒဏ်ကိုခံစားရတဲ့အခါ အပူမရှပ်စေဖို့ – ● နေပူထဲက ထွက်ပြီး အရိပ်ထဲနေပါ။ လေအေးပေးစက်ဟာ နွေရာသီမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ● ရေများများ သောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီနဲ့ အရက်ကို ရှောင်ပါ။ ရေနဲ့ အသီးဖျော်ရည်တွေ များများသောက်ပေးပါ။ ● ရေအေးအေးနဲ့ ရေပတ်တိုက်ပါ။ ရေချိုးပါ။ ● အေးတဲ့နေရာမှာ လှဲလျောင်း အနားယူပါ။ ● အလွယ်တကူနဲ့ မအေးတဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတာ၊ အရေးပေါ်သွားတာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ ဆွေမျိုးတွေ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ဆရာဝန် ရှောင်ခိုင်းထားတာကလွဲလို့ ရေများများ သောက်ခိုင်းပါ။ အပူလှိုင်းဖြတ်တဲ့အခါ လူကြီးတွေကို အေးတဲ့နေရာတွေကို လိုက်ပို့ပေးပါ။ Credit – drmyanmar (Dr. Mya Phoo Ngon)
အရမ်းပူလောင် အိုက်စပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သင်္ကြန်မိုး ရွာလိုက်တဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး အေးမြသွားသလို အားလုံးလည်း ပျော်သွားကြမှာပါ။ လူကြီးတွေ ပျော်သလို ကလေးတွေကလည်း မိုးရေထဲ ပြေးဆော့ချင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံးရွာတဲ့မိုးရေကို မချိုးသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ – 1. ပထမဆုံးရွာတဲ့မိုးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အညစ်အကြေး၊ အဆိပ်အတောက်တွေ တော်တော်များများ ပါဝင်ပါတယ်။ 2. အပူကြီး ပူနေရာကနေ ရုတ်တရက် မိုးရွာလိုက်တဲ့အခါ အပူချိန် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းကာ ရာသီတုပ်ကွေး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ 3. ခြောက်သွေ့နေတဲ့ မြေကြီးပေါ် မိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါ စွတ်စို ဗွက်ထပြီး ယာဉ်အန္တရာယ်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိုးရေတွေ စိုလာတယ်ဆိုရင်လည်း ရေနွေးပူပူလေး သောက်၊ နွေးနွေးထွေးထွေးလေး ၀တ်ပြီး အနားယူလိုက်ပါ။ Source – drmyanmar.com
နို့စိမ်းမှိုဟာ သွေးအတွင်းရှိသကြားဓာတ်ကို သိသာစွာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုအားကိုလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ စားသုံးပုံကတော့ သက်သက်လွတ်ကြော်ချက်၍ လည်းကောင်း၊ အသားနှင့် ပေါင်း၍ လည်းကောင်း၊ ဟင်းသီး၊ ဟင်းရွက်တို့ဖြင့် ကြော်ချက်၍ လည်းကောင်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ နို့စိမ်းမှိုခြောက်တွင် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ်တွေကတော့ ကစီဓါတ် ၅၇.၂၇ gm အသားဓါတ် ၂၈.၇၃ gm အဆီဓါတ် ၀.၇၃ gm အမျှင်ဓါတ် ၃၇.၅၂ gm ပြာဓါတ် ၈.၈ gm ဖောလစ်အက်ဆစ် ၅၇.၀ ug အစိုဓါတ် ၁၄.၄၇ gm အင်နာဂျီ ၃၅၀.၅၇ kcl ဗီတာမင် A1 ၀.၅၀ IU ဗီတာမင် B1 ၀.၂၅ mg ဗီတာမင် B2 ၂.၂၅ mg ဗီတာမင် B3 ၂၂.၉၄ ဗီတာမင် B6 ၀.၆၁ mg ဗီတာမင် D3 ၄.၀ ug ဗီတာမင် E ၀.၂ mg အခြားသတ္တုဓါတ် (၅) မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နို့စိမ်းမှိုဟာ အခြားသီးနှံတို့ထက် အာဟာရဓါတ်များစွာ ပြည့်ဝပါတယ်။ Source – စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
မနက်အိပ်ရာထထချင်း ရေသောက်ပေးသင့်ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက အူ၊ ကလီစာတွေကို တက်ကြွလာစေဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ဖို့ မနက်စောစော ရေတစ်ဖန်ခွက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းတစ်ခွက်သောက်ပေးသင့်ပါတယ် နေ့ခင်း ထမင်းမစားခင် နာရီဝက် အလိုလောက်မှာ ရေတစ်ခွက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကို သန့်စင်ပေးပြီး အစာကြေ ညက်စေဖို့အတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းတော့ ရေမသောက်သင့်ပါဘူး၊ ထမင်းစားပြီး နာရီဝက် လောက်ခွာပြီး မှ ရေတစ် ခွက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ရေမချိုးခင်မှာ ရေတစ်ခွက် သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးခုန်နှုန်းမှန်စေရန်အတွက် ရေမချိုးခင်မှာ ရေသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် တစ်ခွက်ကောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ် လေဖြတ်ရောဂါ နဲ့ နှလုံးရောဂါတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ညအိပ်ရာမ၀င်ခင်မှာ ရေတစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ညတရေးနိုးမှာ တစ်ခွက်သောက်ပေးသင့်ပါတယ် အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်မှာ ခြေထောက် ကြွက်တက်ခြင်းတွေ မဖြစ်စေရန်အတွက် ညလယ်တစ်ရေးနိုးရင် ရေတစ်ခွက်သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ RefးDaily Health
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အဓိကစားသုံးကုန်ဖြစ်တဲ့ ထမင်းဖြူဟာ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ကြွယ်ဝပြီး ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်အပိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထမင်းဖြူကစိတ်ကျရောဂါနဲ့လည်း ဆက်နွယ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်ထမင်းချက်စားရင် ဆန်ညိုထမင်းကိုလည်း ရောနှောစားသုံးပေး သင့်ပါတယ်။ တူနာငါးထဲမှာ ပရိုတိန်းဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးအကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ပမာဏနည်းနည်းနဲ့ ချင့်ချိန်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ တူနာငါးကို အလွန်အကျွံစားသုံးမိမယ်ဆိုရင် မာကျူရီဓာတ် များပြားမှုကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ထိခိုက် စေနိုင်ပြီး မှတ်ဉာဏ်အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ပဲပုပ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ တို့ဟူး၊ ပဲပြား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ပဲငပိ စတာတွေဟာ သင့်အတွက်ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုပဲ ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပဲပုပ်ထဲမှာ ဆိုဒီယမ်နဲ့ ဆား ပမာဏများစွာ ပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ ပဲပုပ်ကို အလွန်အကျွံ စားသုံးမယ်ဆိုရင် သွေးတိုးရောဂါလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဦးနှောက်ထဲကို သွေးနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေ စီးဆင်းမှုကို ပိတ်ပင်တားဆီး နိုင်တဲ့အတွက် မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းလိုမျိုး၊ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်း လျော့ကျခြင်း လိုမျိုး ပြဿနာတွေကို ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်ပေါ်ကို ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အရက်ကို ပမာဏတစ်ခုနဲ့ ချင့်ချိန်သောက်သုံးခြင်းကတောင် ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို အားနည်းစေနိုင်ပြီး မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသကြားများတဲ့ အချိုရည်တွေအသင့်ဖျော်စပ် သောက်သုံးနိုင်တဲ့ အချိုရည်တွေမှာ အချိုဓာတ်နဲ့ ဆေးသကြားပါဝင်မှု အလွန်များပြားပါတယ်။ အဲဒီ အချိုဓာတ် တွေဟာ…
The Voice Myanmar မှာ နောက်ပြောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မောင်မောင်အေး
ရီးယဲလ်နှင့် ပီအက်စ်ဂျီတို့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ကို ဒရော့ချီ ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ် ကိုင်တွယ်မည်